डिप्रेशन किन हुन्छ र यसका निदानका कारण के के हुन् ? - EKalopati
डिप्रेशन एक प्रकारले मनश्तापका कारणले सुरु हुन्छ । यो घरायसी समस्या, व्यापार व्यवसायबाट असन्तुष्टि, जागिर र पारिपारिक तालमेल नमिल्नाले, सन्तानबाट आशा गरिएका कुरा नपाउनाले , अचानक प्रिय मान्छे गुमाउनाले यस्ता विभिन्न लौकिक कुराहरुमा सन्तुष्ट हुने वातवरण नहुनाले सुरु हुन्छ । यसलाई हाम्रा धर्मग्रन्थहरुमा मनस्तापको नाम दिइएको छ । एक हिसाबले कुनै पनि कुराबाट हामीले गहिरो असन्तुष्टि लिन थाल्यौं भने डिप्रेशन सुरु हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्दछ । त्यसै कारण खुशी हुने चिजहरुमा मन लगाउनुपर्छ भनिएको हो । त्यसैले आशा हि परमं दुखं निराशा परमं सुखम् भनिएको हो । अर्थात् कुनै पनि कुरामा ज्यादा आशा वा आशक्ति राख्दा हामीलाई दुख प्राप्त हुन्छ । ज्यादा आशक्ति नराख्ने हो भने सुख प्राप्त हुन्छ । हामीले भौतिक कुराहरुबाट शरीरलाई निकै नै सुख दिन सक्छौं तर मन त्यसमा पनि रमाएको हुँदैन ।
तसर्थ मनको शान्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । मनको शान्ति र मनको सुखलाई विज्ञानभैरव नामको ग्रन्थमा यत्र यत्र मनस्तुष्टि मनस्तत्रैव धारयेत् , तत्र तत्र परानन्दस्वरुपं प्रतिपद्यते भनेर बताइएको छ । अर्थात् जहाँ जहाँ तिम्रो मन खुशी हुन्छ त्यसैमा तिम्रो मन लागऊ । त्यहँिबाट नै तिमीलाई परमात्मासम्मको मार्ग मिल्छ । यसको तात्पर्य छाडा होऊ भनेको भने होइन । आफ्नो कुलको आचरण अनुसार , समूहको नीति अनुसार, समाजको नियम अनुसार तिमी आफ्नो खुशीको बाटो पहिल्याउन सक्छौ भनिएको हो ।
यसमा धेरै कुरा समाहित छन् । हामीले आफ्नो खुशीलाई मात्र धेरै महत्व दिन पनि भएन । जसले परिवारको अर्को सदस्यलाई डिप्रेशन हुन जाओस् । यसका अतिरिक्त हामीले यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ कि परिवार र समाजका मान्छेहरु कुनै कुरामा खुशी छन् भने त्यसमा हामीले सरिक भइदिन पर्ने छ । कुनै अत्यन्त माया गरिएका मान्छेहरु आफूबाट टाढा हुँदा वा बित्दा सबैले यही बाटो तय गर्नु नै छ भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ । मद्यपान धुम्रपान र लागु औषधका कारण सेवन गर्ने व्यक्ति वा उसको परिवारको कुनै सदस्यदाई पनि चिन्ताको कारण डिप्रेशन भएको हामी देख्न सक्छौं । यसलाई हल गर्न समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ । समय बितेपछि पछुताएर हामी मनस्तापमा पर्न हुँदैन । विशेषगरी यो चिन्ताबाट सुरु हुने भएकोले चिन्ता हटाउने काम नै यसबाट मुक्ति पाउने सरल उपाय हो । भनिन्छ कि चिन्ता चितासमा नास्ति , चिन्तया किं विद्यते ? आत्मानंं दहते चिन्ता निरात्मानं चिता दहेत् । अर्थात् चिन्ताले नमर्दैमा जलाउँछ चितालेचाँहि मरेकालाई जलाउँछ । तसर्थ कुनै पनि कुराको चिन्ता लिन हुँदैन । मनस्तापलाई नजिक आउनै नदिएपछि डिप्रेशन हुनै सक्तैन । तनावलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तनावलाई बढाउने काम गर्न हुँदैन । यसको लागि हामी ध्यान, योग, शारीरिक व्यायाम, गीत सुन्ने, साथीभाइसँग गफ गर्ने र गर्न लागेको कुरामा एकदमै मन लगाएर खुशीसाथ गर्न सक्छौं । जसले तनाव हल गर्छ ।
डिप्रेशन भयो भने के हुन्छ ?
डिप्रेशन भयो भने मान्छे एकोहोरो हुन्छ । उसलाई कुनै पनि मान्छेको कुरा मन पर्दैन । ऊ एकदमै एकान्तप्रिय हुन थाल्छ । उसलाई यस्तो हुन्छ कि आत्महत्याका बिचारहरु आउँछन् । मर्न मन लाग्छ । ऊ जीवनसँग हारेको महसुस गर्छ । चिमित्सकहरु यस्तो बताउँछन् । यसका सबैमा एकै खाले लक्षण हुँदैन । कुन कुराबाट मनस्ताप सुरु भएको हो । त्यसमा भरपर्ने कुरा हो ।
सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउँदा, निकै कमजोर र कमसल साबित हुँदा, पनि यो सुरु हुनसक्छ । यसका लक्षणहरुचाँहि एकै प्रकारको नहुने कारण ठोकुवा गर्न सकिँदैन । कहिलेकाँही डिप्रेशनको बिरामीले आफूलाई सो रोग भएको मान्न नै तयार नहुने पनि हुनसक्छ । यो एक मनोरोग जस्तै हो । डिप्रेशनको बिरामीले अनेक हर्कतहरु गर्दछन् । यसलाई पहिले पहिले मानिसहरुले बहुलाएको पनि भन्ने गर्दथे । तर, यो पागलपन नभएर एकप्रकारको रोग हो । ढिलोचाँडो यो ठीक हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसैले हामीले कुनै पनि ठूला घटना हुँदा पनि चिन्ता गर्ने गर्न हुँदैन । त्यसको हल गर्ने उपाय निकाल्नु नै यसबाट बच्ने उपाय हो ।
डिप्रेशन भयो भने के गर्ने ?
डिप्रेशन भएको जानकारी पाएमा हामीले चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । आफ्ना समस्या लाज नमानी बताउनुपर्छ । यसमा परिवारका सदस्यहरुले पनि चिकित्सकबाट राय सल्लाह लिनुपर्छ । जुन कारणले डिप्रेशन सुरु भएको हो त्यो कारण चिकित्सकसँग बताउनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई हल गर्न परिवारका सदस्यहरुले रमाइलो वातावरण सिर्जना गरिदिने, एक्लै नछाड्ने, उसका कुराहरु सुनिदिने र समस्याको हल गरिदिने गर्नुपर्छ । यो माया र ममताबाट साम्य हुने रोग हो । डिप्रेशनको अन्तिम विन्दु आत्महत्या भएकाले यसलाई हल गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै बिरामीको ख्याल र माया हो ।
अर्कोतर्फ ध्यान, प्राणायाम, योग र स्वस्थ आहारको कुरा आउँछ । जसले हामीलाई जीवनदृष्टि दिन्छ । यसले शान्ति दिलाउँछ । भगवाप्रति आस्था राख्ने कुरा पनि छँदै छ । बिरामीलाई रमाइलो लाग्ने कुराहरु गरिदिने पुराने घटनालाई दोहोर्याएर खाल्टो खन्ने काम गर्नुभन्दा त्यसलाई बिर्साइदिन त्यसको बारेमा कुरा नै नगर्ने गर्दा यसबाट छिटो मुक्ति मिल्छ । यो नियमित औषधि सेवन र मायाका कारण निको हुन्छ ।
Previous articleडढेल्धुराकाे अमरगढी नगपािलकाकाे जुगाड, मेयरकाे गाडी एम्बुलेन्स बनाइयाे
Next articleमहानगरलाई जिम्मेवारी उठाउन दिने हो भने हामी उपत्यकामा बस्ने सबैलाई सुरक्षित राख्न सक्छौं : मेयर शाक्य